आहा गजल : निर्मल खडका (निर्जल) - Aaha Sanchar
२०७५ श्रावण ३१, बिहीबार १३:३७
निर्मल खडका निर्जल
भुमे गाउपालिका ८, कोर्जा रुकुम पूर्व
तिमीले त्रास देउ हेर, धाकले हुदैन ।
आमाको काख जस्तो तिम्रो, काखले हुदैन ।
प्रेमलाइ पैसासंग रुपान्तरण गर्छौ किन ?
माया प्रेम जस्तो चिज यहाँ, लाखले हुदैन ।
तिम्रो घरमा चौरासी ब्यन्जन खाना पाक्छ
तिमीलाई मेरो घरको सिस्नु, सागले हुदैन ।
चन्द्रमा जस्तो तिम्रो रुप भएर के भयो र ?
यदि मनको सुन्दर छैनौ भने, च्वाकले हुदैन ।